La COCHINCHINE na Nam Ky - Ny Tany Masin'i Vietnam Studies
3355 Views Prof. Assoc. Hung Nguyen MANH
La Cochinchine or Namonjy Ky, ny faritra midadasika atsimo atsimon'i Nam, dia lasibatra amin'ireo voromanidina frantsay natao tamin'ny lalana naharesy azy ireo tamin'ny faran'ny taona 19th taonjato. Ity teny mifangaro ity dia misy singa roa: Cochin or mahandro manondro chaochi (taloha Viet Nam) ary Chine avy amin'ny qi (dinastika iray tany Sina nandritra ny vanim-potoana nisy ny Ady) manondro ny toerana akaiky azy mankany Shina. Saingy, misy petra-kevitra iray hafa manondro an'io anarana io Cochin, ny mpitondra ny Mekong reniranona Kohchin na Cuu Long), izay nandalo nanerana Thuy Chan Lap (Rano Chenla) ary izay nipetrahan'i Nam Ky mponina.
Ao amin'ny 15th taonjato maro, nijanona teo amin'ny lapan'i Mekong hividy sakafo sy rano mangatsiaka ireo mpikaroka mpihaza ranomasina eropeana. Azo lazaina fa karazana namorona i Nam KySilk Road”Amin'ny ony, tena tsara amin'ny fifanakalozana ara-barotra amin'ny rano. Ny mpikaroka eoropeana koa no niantso azy io Chochi or Cochin mba hanavahana azy amin'ny Cochin any India.
Nisy fotoana teo amin'ny tantaran'i Viet Nam, Cochinchine dia natao amin'ny famolavolana Dang Trong, ary Tonkin ho an'ny Dang Ngoai. Nandritra izany fotoana izany, i Viet Nam, Laos ary Kambodza dia notendrena niaraka tamin'ny anarana hoe “Indochina". Ity teny ity dia niteraka fisafotofotoana tamin'ny fomba fijerin'ny vahiny tany Afovoany lavitra raha namolavola ny fizahan-dry zareo izy ireo satria manondro an'i India sy i Shina. Ankoatr'izay, ny vahiny dia manontany tena ny amin'ny antony nizarana an'i Viet Nam: Dang Trong ary Dang Ngoai ary ny faritra teo anelanelan'izy ireo, izay toerana nisy ny renivohitra no nantsoina An Nam. Amin'ny fanjanahana frantsay, nomena anarana izy ireo Bac Ky, Namonjy Ky ary Trung Ky tsirairay avy.
Na dia Namonjy Ky, faritra iray miatrika fanenjehana politika marobe, nantsoina hafa amin'ny fizotry ny tantara: Gia Dinh (1779-1832); Namonjy Ky (1834-1945); Nam Bo (1945-1948); Nam Phan (1948-1956); Nam Viet or Mien Nam (1956-1975); na ny Phuong Nam faritra ankehitriny.
Ity boky ity mitondra ny lohateny La Cochinchine mamaritra ny tantara, ny toekarena, ny kolontsaina ary ny fizahan-tany ny tany lehibe ao amin'ny faritry ny reniranon'i Cuu Long na hafa koa antsoina hoe Nam Ky Luc Tinh. Tany am-piandohan'ny 20th taonjato maro, i Nam Ky dia lasa zanatany Frantsa ary nofehezin'i Governora D. Cognacq. Ny anarany dia hita eo amin'ny fonon'ilay boky ho fijoroana ho vavolombelona momba ny lanjan'ny kolontsaina tsy hita ao amin'ny boky mihitsy.
Hanomboka amin'ny lahateny nataon'ny Governora Jeneraly Indochina ilay boky Alexandre Varenne amin'ny 11th Oktobra 1925 tao St-Gervais. Ity lehilahy ity dia fahitan'ny avara-tsaina frantsay tamin'izany fotoana izany ho mpanao politika manao fiarahamonina. Ny lahateny dia toa mampiditra modely ho an'ny fanapahan-kevitry ny maha-olombelona, ​​mba hahatonga ny boky ho mora kokoa amin'ny faribolana ara-politika any Paris fa tsy any Viet Nam.
Na izany aza, tsy ahitana ny antsipiriany momba ny mpanoratra ilay boky, Marcel Bernanose (1884-1952). Hitanay avy amin'ireo tahiry, fa manam-pahefana izy, mpanolo-tsaina ara-kolontsaina ho an'ny Governemanta maro an'i Nam Ky sy Governemanta Jeneraly Indochina, ary namela asa fikarohana sasany momba an'i Indochina izy.
Tokony hiresaka koa isika Saripika Nadal-Saigon, mpihaza tantara Indochina, izay sary no nahatonga an'io boky io ho tantaran'ny Nam Ky.
La Cochinchine Navoakan'ny Photo Nadal House tamin'ny taona 1925 voalohany, miaraka amina pirinty 400 dika mitovy isa. Ny dika ampiasainay amin'ity andiany ity dia isaina 319 ary ahitana 436 sokitra varahina vita amin'ny trano iray.
Na dia teo aza ny fikorontanana tao anatin'ny 100 taona lasa, ny boky La Cochinchine voatahiry ho toy ny memento ao amin'ny fianakavian'ireo manampahaizana Truong Ngoc Tuong avy Cai Lay, Tien Giang. Izao dia naverina namerina Xua & Nay (Ny lasa sy ny ankehitriny) Gazety sy Hong Duc Mpitory amin'ny fiteny frantsay sy anglisy amin'ny endrika am-boalohany, mbola ampiana amin'ny fandikana Vietnamianina. Ireo mpamaky dia hahita an-tsoratra ao anaty memoire amin'ny fiandohan'ny 20th Fanjanahan-tany Nam Ky.
Voninahitra lehibe ho ahy ny mampahafantatra ny boky ho an'ireo mpamaky amin'ny fangatahana of Xua & Nay Magazine.
◊ La COCHINCHINE na Nam Ky - Vi-VersiGoo
◊ La COCHINCHINE na Nam Ky - Fr-VersiGoo
◊ La COCHINCHINE na Nam Ky - Sp-VersiGoo
◊ La COCHINCHINE na Nam Ky - Ru-VersiGoo
◊ La COCHINCHINE na Nam Ky - Chs-VersiGoo
◊ La COCHINCHINE na Nam Ky - Cht-VersiGoo
◊ La COCHINCHINE na Nam Ky - Ar-VersiGoo
◊ La COCHINCHINE na Nam Ky - Jp-VersiGoo
(Visited 2,148 fotoana, 2 fitsidihana amin'izao fotoana izao)
← Ny Tany Masin'i Viet Nam Studies - NY TENINY
GOUJIAN: sabatra Sinoa fahiny izay manohitra ny fotoana (7,950)
Fitsidihana anio: 323
Andro farany 7 nitsidika: 2,142
Total visits: 420,196